ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြonနာများအတွက်သီအိုရီယူဆချက်များ -“ အခြေအနေ” နှစ်ခုသည်သီအိုရီအရအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းကွဲပြားပါသလား။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုပုံစံကိုသုံးသပ်ခြင်း) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြonနာများအတွက်သီအိုရီယူဆချက်များ -“ အခြေအနေ” နှစ်ခုသည်သီအိုရီအရအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းကွဲပြားပါသလား။ (Grubbs ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 , Volume ကို 48, ပြ2နာ ၃၊ စစ 417-423 |
Matthias အမှတ်တံဆိပ်, Stephanie Antons Elisa Wegmann, မာ့ခ် N. Potenza
Grubbs, ပယ်ရီ, အလိုရှိနှင့်ရိဒ်အားဖြင့်ပစ်မှတ်အပိုဒ် (2018) တစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသောနှင့်အချိန်မီခေါင်းစဉ်အမှာစကားပြောကြား။ Grubbs et al ။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ dysregulated အသုံးပြုမှုမလိုဘဲညစ်ညမ်းစွဲခံအဖြစ် Self-ခွဲခြားသတ်မှတ်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်ငြင်းခုန်။ Grubbs et al ။ "တဦးတည်းရဲ့နက်ရှိုင်းစွာကျင်းပကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ဖျက်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်၏အတွေ့အကြုံကိုဦးဆောင်လမ်းပြတန်ဖိုးများ-ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence-အမြင်ကျယ်ပေါ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်အာရုံနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲစာပေပြန်ဆိုအတွက်ကူညီစေခြင်းငှါကြောင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence (PPMI) ကိုညစ်ညမ်းပြဿနာများ၏စံပြအကြံပြု ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်းနေတာကို Self-ရိပ်မိပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ "
PPMI ပေါ်ရှိပုံစံကိုသုံးသပ်သင့်သည်။ ပုံစံကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြသည့်ပုံ (Grubbs et al ။ ပုံ ၁ ကိုကြည့်ပါ။ ) 2018လူပုဂ္ဂိုလ် / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြressနာ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း / relational ဒုက္ခနှင့်ဘာသာရေးနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာစိတ် ၀ င်စားမှုတို့ကိုအဆင့်သုံးမျိုးခွဲခြားသည်။ စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြံပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိသည်။ Pathway 1 ကို“ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြproblemsနာများ” နှင့်“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ” ဟုခေါ်ဝေါ်သော Pathway2တို့ဖြစ်သည်။ Grubbs et al ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးယန္တရားများကိုထင်ဟပ်စေသော Pathway 1 သည်မိတ်ဆက်ထားသောပုံစံ၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းအစား၎င်းကိုအခြားသီးခြားမော်ဒယ်များ (ဥပမာ - I-PACE မော်ဒယ်) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြောင်းဖော်ပြသည် , လူငယ်, Laier, Wölfling & Potenza, 2016b) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Grubbs et al ။ သူတို့ရဲ့စံပြ၌ဤ Pathway 1 ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဤလမ်းကြောင်းညစ်ညမ်းတစ်ခုစွဲလမ်းသို့မဟုတ် dysregulated အသုံးပြုမှုအများအပြားရှုထောင့်ပါရှိသည်။ ဒီလမ်းကြောင်း၏အချို့ရှုထောင့် PPMI ၏ယန္တရားများချိတ်ဆက်ဥပမာ, နှစ်ဦးစလုံး "dysregulation" နှင့် "ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence" ထို့နောက်ဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ရသော "Self-ရိပ်မိညစ်ညမ်း-related ပြဿနာများ" တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ယူဆနေကြသည်။
ကျနော်တို့ကဒီချဉ်းကပ်မှုမှ dysregulated အသုံးပြုမှုအပေါ်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်နှင့် PPMI နှင့်အတူဤလမ်းကြောင်းချိတ်ဆက်ဖို့မလုံလောက် Grubbs et al နေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလမ်းကြောင်း-ကြောင်းငြင်းခုန်။ (2018) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကနေ, က abstinence ဘို့ဥပမာ, လှုံ့ဆျောခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. , နှစ်ခုအလားအလာလမ်းကြောင်း၏အဓိကဒြပ်စင်အကြားဆက်သွယ်မှုအပေါ်နောက်ထပ်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့နဲ့ပိုပြီးအပြည့်အဝဒေတာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်, အထူးသဖြင့်အပြည့်အဝဆောင်းပါးထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမရကအခြားရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ပိုကောင်းပါပြီမယ်လို့နှင့် ထိုကဲ့သို့သော setting တွင် Self-ထိန်းချုပ်မအောင်မြင်မှုများ။ ထို့ပြင် Grubbs et al ။ ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဘာသာရေးအခင်းအကျင်းအတွင်းရှိအခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏လက်ရှိပုံစံများအခင်းအကျင်းအတွင်းစံပြနေရာနိုင်ဘူး။
အဆိုပါ Model ရဲ့ Pathway 1 အပေါ် comments: Dysregulated ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း
မော်ဒယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးလမ်းကြောင်းအဘယ်အရာကို Grubbs et al ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပါဝင်ဖြစ်စဉ်များတစ်ရိုးရှင်းသောပုံဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းသို့မဟုတ် dysregulated ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်ကိုဖော်ပြရန်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှဦးဆောင် predisposing အချက်များ dysregulation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သကဲ့သို့ဤလမ်းကြောင်းသည်၎င်း၏လက်ရှိပုံစံအတွက်, ကွဲပြားခြားနားမှု၏ကန့်သတ်တစ်ဦးချင်းစီဥပမာ (ဥပမာ Impulse, အာရုံခံစားမှု-ရှာ, လိုငွေပြမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း) တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းဟာ dysregulated အပြုအမူ Self-ရိပ်မိညစ်ညမ်း-related ပြဿနာများကိုကျော်, နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်, ဒုက္ခဆင်းရဲမှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ dysregulation နှင့်ဆက်နွယ်သောအဓိကအချက်သာ Grubbs et al အားဖြင့်မလုံလောက်မှု, နှင့်အပေါ်ယံဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည်။ (2018) ။ ဒီလမ်းကြောင်းဟာမော်ဒယ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မရပေမယ့်, ကပိုကောင်းခွဲခြား (သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်) နိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်း၏ dysregulated အသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအပါအဝင်ထံမှနှစ်ခုလမ်းကြောင်းအကျိုးအမြတ်ရှိသည်ဟုလိမ့်မယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း (သို့) ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့်ထပ်ဆောင်းသီးခြားလက္ခဏာများရှိကြောင်းလေ့လာမှုများစွာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထင်ရှားသောသာဓကများ၌လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည် (Laier & Brand, 2014; လူး၊ မ၊ လီ၊ ဟူး၊ လျောင်၊ 2014; Stark et al ။ , 2017), လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှုများ (Whang, Lee, & Chang, 2003; Yoder, Virden, & Amin, 2005), နှင့် psychopathology (Kor et al ။ , 2014; Schiebener, Laier, & အမှတ်တံဆိပ်, 2015; Whang et al ။ , 2003) ။ ဤသွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်စွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ဆိုးကျိုးများသည်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပြင်ပသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းအစပျိုးမှုများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး (တားစီးထိန်းချုပ်မှု) လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ( Allen, Kannis-Dymand, & Katsikitis, 2017; Antons & Brand, 2018; ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b; Schiebener et al ။ , 2015; Snagowski & အမှတ်တံဆိပ်, 2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကအချက်မှာ cue-reactivity and craving response (ဥပမာ၊ Antons & Brand၊ 2018; ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016a; Gola et al ။ , 2017; Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015; Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte, & Brand, 2013; Snagowski, Wegmann, Pekal, Laier, & Brand, 2015; Weinstein, Zolek, Babkin, Cohen, & Lejoyeux, 2015) ။ ဒါဟာညစ်ညမ်းသုံးပြီးအေးစက်လုပ်ငန်းစဉ်များ (BANCA et al To-ကြောင့်အားအခါဆန္ဒပြည့်ကြုံတွေ့ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်။ , 2016; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse & Stark, 2016; Snagowski, Laier, Duka, & Brand, 2016ညစ်ညမ်းတဲ့ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းမှဦးဆောင်သည့်ညစ်ညမ်း-related လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့) ဖွဖျောပွထိခိုက်စေတုံ့ပြန်မှု, ( cf. အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b) ။ ယခင်လေ့လာမှုများဦးနှောက်-ဆုလာဘ်စနစ်များ hyperactivities, အ ventral striatum အပါအဝင်အထူးသဖြင့်သူများအနေနဲ့တဏှာအတွက်တိုးနှင့်တစ်ဦးစွဲလမ်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (အမှတ်တံဆိပ် et al ၏အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်း။ , ညွှန်ပြ 2016a; Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016; Gola et al ။ , 2017).
သူတို့ရဲ့မော်ဒယ်မှာတော့ Grubbs et al ။ (2018) အလားအလာဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုစိတ်ခံစားမှု dysregulation အောက်ရှိလူသိများတဲ့တဏှာအယူအဆ subsume ။ သို့သော်တဏှာ Carter က et al (ကစိတ်ခံစားမှုကိုကိုယ်စားပြုကတည်းကစိတ်ခွန်အားနိုး, စိတ်ခံစားမှု dysregulation ထက်အများကြီးပိုဖြစ်တယ်, စွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုမှဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု။ , 2009; Carter က & Tiffany, 1999; Tiffany၊ Carter နှင့် Singleton မှ 2000) ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Breiner, Stritzke, & Lang, 1999; ရော်ဘင်ဆင်နှင့်ဘာရစ်၊ 2000) ။ Cyber ​​Pornography Use Inventory-9 (CPUI-9) (Grubbs, Volk, Exline, & Pargament) မှတွေ့ရှိသောတွေ့ရှိချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ တဏှာဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်း၏ဆက်စပ်မှု။ 2015b) အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတွေ့ရှိချက်များ (CPUI-9 ၏“ ရူပါမဖြစ်မနေ” ရှုထောင့်မှခွဲစိတ်ခြင်း) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အထိခိုက်မခံပုံရသည် (ဖာနန်ဒက်စ်၊ Tee & ဖာနန်ဒက်စ, 2017).
Grubbs et al အားဖြင့်မော်ဒယ်မှာ "အနိမ့် Self-ထိန်းချုပ်မှု" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ (2018) အလားအလာလည်းပါဝင်သည်သို့မဟုတ်တဏှာတုံ့ပြန်မှု (Bechara ၏ inhibitors အဖြစ်လျှော့ချအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကိုရည်ညွှန်းသည် 2005ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းစသည့်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုယန္တရား၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်စွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုလိုစိတ်ရှိသူများ (Laier & Brand, 2014; Laier, Pawlikowski, & Brand, 2014a; Laier, Pekal, & အမှတ်တံဆိပ်, 2014b) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ dysregulation တစ်ဦးညစ်ညမ်းတွေကိုနှင့်တဏှာဆီသို့တိုးမြှင့် Response အဖြစ်လျှော့ချထိန်းချုပ်ရေးထိုကဲ့သို့သောမြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်တစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်ရာထူးတိုးယန္တရားများ, အထီးကျန်ဆန်, psychopathology (အမှတ်တံဆိပ် et al ကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ , 2016b; Stark et al ။ , 2017) နှင့်ထကြွလွယ်သော (Antons & Brand, 2018; Romer Thomsen et al ။ , 2018; Wéry, Deleuze, Canale, & Billieux, 2018) ။ Grubbs et al အားဖြင့်မော်ဒယ်ပါ။ ဤရှုပ်ထွေးသောအသင်းအဖွဲ့များလုံးလုံးလြားလြားသောဤရှုထောင့်အချို့ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်သောတဦးတည်းရှုထောင်ဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။ သို့သော် Pathway 1 ၏ရှုပ်ထွေးသရုပ်ဖော်ထားတဲ့အလားအလာကြောင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence နှင့် / သို့မဟုတ်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် dysregulated အသုံးပြုမှုရှိမရှိ, ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်း-related ပြဿနာများ၏ etiology အကြားပိုပြီးတိကျစွာခွဲခြားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Model ရဲ့ Pathway2အပေါ် comments: ကြောင့်ကိုယ်ကျင့်တရား Incongruence မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းမှ Related အတွေ့အကြုံပြဿနာများ
ယခင်လေ့လာမှုများ, Grubbs et al အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ (2018) သီအိုရီ PPMI ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအများအပြားအယူအဆများ၏အပြန်အလှန်သရုပျဖျော။ တွေ့ရှိချက်များကိုယခင်ကထုတ်ဝေသုတေသနအပေါ်အခြေခံကြသည်နေချိန်မှာသူတို့သညျ "ရိပ်မိစွဲလမ်း" နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆချက်ကနေဆငျးရဲဒုက်ခနှင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်အတူတကွအလားအလာကန့်သတ်ထားလေ့လာမှုများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခံနှင့်အတူ, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စကေး operationalized ဘယ်လိုပေါ်အခြေခံပြီးမိစ္ဆာ dichotomy ထုတ်လုပ်စေခြင်းငှါ ယနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Grubbs et al ။ (2018ဘာသာရေးသည် Pathway 2. တွင်မိမိကိုယ်ကိုအပြာစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများနှင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်ဟုငြင်းခုန်ကြသည်။ မြားများမှအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Grubbs et al ။ ဘာသာရေးကနေမိမိကိုယ်ကိုရိပ်မိသည့်ပြproblemsနာများ (အနည်းဆုံးတစိတ်တပိုင်း) တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကြံပြုပုံရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Grubbs et al ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရိတ္တပျက်ပြားမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အမင်းစွဲလမ်းမှုတို့ကြောင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာမှမြှားများပါ ၀ င်သည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသည့်အထိကိုယ်တိုင်ဘာသာရိပ်မိသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုခံစားချက်များပါ ၀ င်သည် (Grubbs et al ။ ပုံ ၁ ကိုကြည့်ပါ။ ) 2018) ။ ဒါဟာဘာသာရေးထံမှရောက်သော Self-ရိပ်မိညစ်ညမ်း-related ပြဿနာတွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုတစ်တစိတ်တပိုင်းဖျန်ဖြေညွှန်ပြရန်နှင့်ပြုပြီကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုံရသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါဟာဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုယင်း၏အလားအလာအသုံးပြုမှုကိုလျော့ပြီးကတည်းကအပိုဆောင်းအချက်များညစ်ညမ်းသုံးပြီးအထောက်အကူပြုရသောတွေ့မြင်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ တစ်နည်း: ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုချိုးဖောက်သော်လည်းအဘယ်ကြောင့်အချို့သောကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများနှင့်အတူလူတွေ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုကြတာလဲ?
ဖော်ပြရကျိုးနပ်တစ်ခုမှာလေ့လာရေးအတွက် Meta-analysis သည်တွင်ထည့်သွင်းလေ့လာမှုတွေအများအားဖြင့်ခရစ်ယာန်အထီးလူဦးရေစုံစမ်းစစ်ဆေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာ, လေ့လာမှုမှာ Grubbs, Exline, Pargament, ချိတ်, Carlisle တို့ (အားဖြင့်2015a), သင်တန်းသားများ၏ 59% စံပြအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးတစ်ဦးချင်းစီ၏အခြို့သောအဖွဲ့ခွဲများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်လျှင်မေးခွန်းပြုစုပျိုးထောင်, ခရစ်ယာန် (36% ပရိုတက်စသို့မဟုတ်ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်, 23% ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်များကို) တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပွငျ, ဒီနမူနာများတွင်ပါဝင်သူများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံတစ်ပုံ (32%) ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်မသိဝါဒီအပါအဝင်ဘာသာရေးအရ unaffiliated ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ဘာသာရေးအလွန်ပထမဦးဆုံးခန့်မှန်းအခါ PPMI အပေါ်မော်ဒယ်၏ Pathway2Non-ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်တရားဝင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့အဖြစ်မေးခွန်းထုတ်။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာဆက်စပ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့နေရတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုပုဂ္ဂိုလ်များ '' ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဘာသာရေးအကြားနောက်ထပ်အလားအလာရှိသော interaction ကရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, non-လိင်ကွဲတိမ်းညွတ် et al Grubbs အတွက်သင်တန်းသားများကို၏ (အနည်းဆုံး 10% နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်။ , 2015aလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဘာသာရေးနှင့်လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု (ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများကိုချိုးဖောက်ခြင်း) အကြားပconflictsိပက္ခများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးထိုပconflictsိပက္ခများသည်ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်သောကရောက်ခြင်း (ဥပမာ - လိင်ကွဲအကြောင်းအရာများ) ကိုသက်ရောက်နိုင်သည်။ PPMI အပေါ်ဘာသာတရား၏သက်ရောက်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်အလားအလာရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ အလားတူပင်လက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုမကြာခဏပုံဖော်ခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်သွေးစွန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလူကြိုက်များသောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည် (Bridges, Wosnitzer, Scharrer, Sun, & Liberman, 2010; O'Neil, 2018), ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကငျြ့ဝတျ incongruence အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ညစ်ညမ်း-content တွေကို-related အချက်များအဆိုပါလမ်းကြောင်း / မော်ဒယ်အတွက်အတိအလင်းမပါဝင်ပါ။ ကျနော်တို့ကငျြ့ဝတျနှငျ့ / သို့မဟုတ်ဘာသာရေးတန်ဖိုးများနှင့်အတူ incongruence ရှိနေသော်လည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှဦးဆောင်သည့်အချက်များဖွယ်ရှိတင်ပြထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးမသိမသာကွဲပြားဖြစ်ကြောင်း။ ငြင်းခုန်
ထည့်သွင်းစဉ်းစား warranting အပိုဆောင်းအချက်များမီဒီယာ-တိကျတဲ့ရှုထောင့်နှင့်တစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Grubbs et al အားဖြင့်အကျဉ်းချုံးခဲ့ကြသောမီဒီယာ-တိကျတဲ့အချက်များ၏ဥပမာများ။ (2018Cooper ကများကအကြံပြုကဲ့သို့), (တတ်နိုင်, အမည်ဝှက်နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း (ထိုသုံးဆတစ်ဦးကအင်ဂျင်) များမှာ1998), နှင့်လူငယ် (အားဖြင့် ACE အား-မော်ဒယ်အတွက်အကြံပြုအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, အဖြစ်မှန်ကနေမှလွတ်မြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းသောလေ့လာရေး2008) ။ အသုံးပြုခြင်းတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုချိုးဖောက်သော်လည်း, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှဦးဆောင်အချက်များလည်းထိုကဲ့သို့သောရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (Stark et al အဖြစ်တစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများ, ၌အိပျနိုငျတယျ။ , 2017) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အတိတ်အတွေ့အကြုံများ (ဥပမာ, အတွေ့အကြုံရကျေနပ်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းကျေနပ်မှု) ( cf. အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016bလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်သဘာဝအားဖြင့်အားဖြည့်ပေးသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ (စဉ်ဆက်မပြတ်) အသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းတိုးမြင့်နိုင်သည် (cf. Georgiadis & Kringelbach, 2012).
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအချက်နှစ်ခုလမ်းကြောင်းအကြားပိုပြီးဆက်သွယ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Grubbs et al ကတည်းကအထူးအရေးကြီးပါသည်။ (2018) သူတို့အထောက်အကူပြုရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုငြင်းခုန် "ညစ်ညမ်းစွဲစာပေပြန်ဆို။ " ထို့အပြင်ခုနှစ်, Grubbs et al ။ ပြည်နယ်: "ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်ပိုမိုရိုးရှင်းစွာ, ရိပ်မိစွဲလမ်း (ကကြိုတင်စာပေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီးကဲ့သို့) မကြာခဏဖွယ်ရှိကြောင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ၏ခံစားချက်များကိုအဖြစ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုယေဘုယျအမြင်များများအတွက် proxy ကိုအဖြစ်လည်ပတ်ဖြစ်၏။ "
ကျနော်တို့စံပြသက်တမ်းဖြစ်ခြင်းများနှင့်အလားအလာမြင့်မားစွာပြဿနာမဟုတ် "စွဲရိပ်မိ" နဲ့သဘောတူသည်။ "ရိပ်မိစွဲ" define ဖို့ CPUI-9 စုစုပေါင်းရမှတ်များအသုံးပြုမှုသုံးခု subscales မလုံလောက်မှု, စွဲအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အကဲဖြတ်ရန်ကြောင်းပေးထားသင့်လျော်သောမထင်ထားဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, တဏှာလုံလုံလောက်လောက်ကဤပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ (စဉ်းစား (အထကျကိုကြည့်ပါ), စွဲအရေအတွက် / ကြိမ်နှုန်းအတိုင်းအတာအားဖြင့်သတ်မှတ်မထားဘူးသည်မဟုတ်, ဖာနန်ဒက်ဇအတွက် CPUI-9 ရမှတ်မှဆက်စပ်အဖြစ်လည်းအရေအတွက် / ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာ၏ဆွေးနွေးမှုကိုတွေ့မြင် et al ။ , 2017), နှင့်စှဲဖို့သက်ဆိုင်ရာများစွာသောအခြားရှုထောင့်လုံလောက်စွာ) (ဥပမာဆက်ဆံရေးအတွက်နှောင့်အယှက်, အလုပ်အကိုင်, ကျောင်းစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ဘာသာရေး / ကိုယ်ကျင့်တရားအယူအဆနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုများမှဆင်းသက်လာသောသူတို့သည်အဖြစ် CPUI-9 မေးခွန်းများကို, အများစုမှာပိုပြီးနှစ်ခုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်း CPUI-9 နှင့်အတူကောင်းစွာမပတျသကျဘူး Grubbs et al (compulsive နှင့် Access မှဆက်စပ် subscales ။ , 2015a) ။ ဤအကြောင်းကြောင့်အချို့သုတေသီများ (ဥပမာ, ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။ , 2017) ဖော်ပြထားပါပြီ, ကတသမတ်တည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအရေအတွက်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာမပြပါဘူးသောစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဖြစ် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်သည် CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale ၏သင့်လျော်သောရက်တွင်သံသယကိုနှင်ထုတ်" ။ ထို့ပြင် "ရိပ်မိစွဲ" အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့စကေးအတွက်ဤပစ္စည်းများကို၏ပါဝင်မှုကိုရိပ်မိ compulsive အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်အလှူငွေလျော့ကျလာခြင်းနှင့်ရိပ်မိကိုယ်ကျင့်တရား incongruence (Grubbs et al များ၏အလှူငွေ inflating တွေ့ရှိချက် skew ဖြစ်နိုင်သည်။ , 2015a) ။ ဤအဒေတာ (အလားအလာအဆိုပြုထားမော်ဒယ်များ၏ထောက်ခံမှုအတွက်) အတိုင်းအတာအတွက်အခြားသူများထံမှဤပစ္စည်းများကို၏ခွဲခြာအထောက်အပံ့ပေးစေခြင်းငှါနေစဉ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသောအခါ, ပစ္စည်းများခံစားမှုဖျားနာ, ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်အပေါ်သာအာရုံစိုက်။ ဤရွေ့ကားအပျက်သဘောခံစားချက်တွေကိုအနုတ်လက္ခဏာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များနှင့်ပွဲတစ်ပွဲတိကျတဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၏တိကျသောရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသူမြားကိုသာဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ကိုယ်စားပြုသည်။ စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် PPMI disentangle ၎င်းထိုသို့မဟုတ်ဘဲသာ PPMI ဘက်စဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းစွဲလမ်းသို့မဟုတ် dysregulated အသုံးပြုမှုယန္တရားများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အခြေအနေနှစ်ခုနားလည်နိုင်ရန်အတွက် PPMI မှပံ့ပိုးသောသူတို့အားအကြားနှင့်သူတို့အမှန်ပင်ဖြစ်ကြရှိမရှိအလားအလာ interaction က သီးခြား။ Grubbs et al ။ (2018) ကိုအပိုင်း၌ (ငြင်းခုန်: "အဘယျသို့တတိယလမ်းကြောင်းကော?") တစ်ပြိုင်နက်တည်း "ရည်မှန်းချက် dysregulation" နှင့် PPMI ကြုံနေရ၏ပေါင်းစပ်ဖြစ်နိုင်သည့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများ, တစ်ဦးအပိုဆောင်းလမ်းကြောင်းရှိမည်အကြောင်းတည်း။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးလမ်းကြောင်းပေါင်းစပ်တတိယတဦးတည်းဖြစ်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြဿနာများ "နှစ်ဦးစလုံး" အခြေခံတဲ့ယန္တရားမပြုစေခြင်းငှါငြင်းခုန်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့စွဲ-related လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များအချို့ PPMI နှင့်ဖြတ်ပြီးလည်ပတ်စေခြင်းငှါ positive "dysregulated အသုံးပြုခြင်း။ " ဒီတူညီအချိန်ကိုညစ်ညမ်း PPMI အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်ရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကွာခြားနှင့် "စခွေငျးငှါကြည့်ရှုသုံးစွဲလျှင်ပင်တည်ရှိနေစေခြင်းငှါ dysregulated အသုံးပြုခြင်း။ နှစ်ဦးစလုံးအခွအေန "များတွင်", "ညစ်ညမ်းအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်သောရည်ရွယ်ထက်ပိုမိုအသုံးပြုသည်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုကိုအခြေခံအဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆင်တူစေခြင်းငှါ, ဤအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
အဲဒီအစားတစ်တတိယ Pathway အကြံပြု၏နှစ်ဦး Pathways ကြားနိုင်သည့်အလားအလာ, Connections ကိုအပေါ်ထင်မြင်ချက်များ
အကွိမျမြားစှာအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုဆက်လက်တည်ရှိ: PPMI ၏သဘောသဘာဝနောက်ခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကဘာလဲ? PPMI သတင်းပို့သူတွေကိုညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ (သေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အလယ်အလတ်) အသုံးပြုမှုကိုကျော်လျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှု၏ခံစားချက်ရှိသလား သူတို့ကညစ်ညမ်းသုံးပြီးခုခံတွန်းလှန်ရန်ခက်ခဲကြောင်းခံစားရပါသလား? သူတို့ကတဦးတည်းလက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့မြင့်မားသောလှုံ့ဆျောမှုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးတားမြစ်ထားကြောင်းတစ်ခံစားချက်အကြားပဋိပက္ခတွေ့ကြုံခံစားပါသလော ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်း (အမှတ်တံဆိပ် et al သုံးစွဲဖို့အလိုဆန္ဒနှင့်အလှုံ့ဆျောမှု၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ , 2011; လက်သမား, Janssen, ဂရေဟမ်, Vorst, & Wicherts, 2010; Stark et al ။ , 2015, 2017) PPMI နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၌တည်၏။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏စိတ်ဆန္ဒနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသောအခါသိမြင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများ၊ ဥပမာအားဖြင့်မက်လုံးပေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောသီအိုရီနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးစလုံး၏သဘောတရား (Everitt & Robbins၊ 2016; ရော်ဘင်ဆင်နှင့်ဘာရစ်၊ 2000) -and အကျိုးဆက်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွေ့အကြုံပြproblemsနာများ, PPMI နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့် dysregulated / စွဲလမ်းအသုံးပြုမှုရှိသူများအတွက်အလားတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်အရေးကြီးသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာတပ်မက်ခြင်းဖြစ်သည် (အပေါ်တွင်ကြည့်ပါ) ။ PPMI သတင်းပေးသူများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်တွန်းအားများနှင့်တွန်းအားများကြုံတွေ့နေရပါသလား။ သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ပြီးအလုပ်များနေသလား။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသောအခါသူတို့၏တန်ဖိုးများကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းရှိမရှိမကြာခဏစဉ်းစားသလား။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးမရှိပါကအပျက်သဘောခံစားချက်များရှိပါသလား။ ဤဖြစ်စဉ်၏အခြေအနေကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်ဤမေးခွန်းများကို PPMI နှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်ဖြေရှင်းသင့်သည်။ ထို့အပြင် PPMI နှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုခွဲခြားရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲချက်များနှင့်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (Borges, Lejuez, & အခြား) အတွက်သရုပ်ပြသကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ချက်များဖြစ်သည်။ ဖဲလ်တန် 2018; Taymur et al ။ , 2016; Wegmann, Oberst, Stodt, & အမှတ်တံဆိပ်, 2017; Xu, Turel, & Yuan, 2012) ။ PPMI ပါ ၀ င်သူများသည်အပျက်သဘောခံစားချက်များကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုပါသလား။ သူတို့ကအားရကျေနပ်မှုကိုမျှော်လင့်ပါသလား (Cooper, Delmonico, Griffin-Shelley, & Mathy, 2004) အခြားလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်အောင်မြင်မရနိုင်? ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသည်ဟုသူတို့ခံစားရသောသီးခြားအခြေအနေများရှိပါသလား (Kraus, Rosenberg, Martino, Nich, & Potenza, 2017) ကကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်?
နှစ်ခုလမ်းကြောင်းအကြားအလားအလာဆက်သွယ်မှုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်နှင့်အနာဂတ်သုတေသနလာအောင်နှိုးဆွနိုင်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးအလားအလာညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုအရေအတွက်သို့မဟုတ်အကြိမ်ရေအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းအသီးသီးညစ်ညမ်းစွဲသို့မဟုတ် PPMI ရှိခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရိပ်မိသောသူအချို့တစ်ဦးချင်းစီ characterizing ဖြစ်ရပ် disentangle နိုင်ဘူး။
ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုစဉ်းစားရေတိုရေရှည်ဆုလာဘ် (ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဆန္ဒပြည့်) နှင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အကြားပဋိပက္ခ
ကျနော်တို့ကပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနာဂတ်ကပိုပြည့်စုံမော်ဒယ်များအတွက်အလားအလာပါဝင်ဘို့လုပ်ငန်းစဉ်များဤအလားအလာ interaction ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်ကြောင်းငြင်းခုန်။ ဤသည်ကိုလည်းအဆိုပြုထားမော်ဒယ်များအတွက်တိကျတဲ့နှင့်ဘုံယန္တရားများ disentangle ဖို့ကူညီနိုင်ဘူး။ အနာဂတ်သုတေသနမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ orthogonality အကြံပြုကြောင်းသုတေသနနှစ်ခုအပြိုင်လိုင်းများအောက်ပါထက်ပိုပြီးများ၏ညှိနှိုင်းရှုထောင့်ကနေအကြိုးခံစားနိုင်ဘူး။
Grubbs et al ။ (2018) ငြင်းခုန်: "မည်သို့ပင်တစ်ဦးချင်းအမှန်တကယ်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွေ့ကြုံရှိမရှိ၏ (ဥပမာစွဲ) သို့မဟုတ် PPMI ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးလက်တွေ့တင်ပြချက်များစိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကိုများနှင့်သိသာထင်ရှားသောလူ့အကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်အသိအမှတျပွု။ ဒါဟာကျနော်တို့လက်တွေ့အာရုံစိုက်မှု၏အာရုံဖြစ်သင့်သောအရာကိုအလင်းကိုကူညီတခုကအခြားရွေးချယ်စရာစိတ်ကူးအဖြစ် PPMI ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြတိုးဒီအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏။ "ကျနော်တို့ကတစ်ဦးချင်းစီ functional ဖြစ်စေကုသမှုအတွေ့အကြုံကိုရှာကြံလျှင်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများ (နှင့်အခြားသူများကို) Clinician အားဖြင့်အာရုံကိုခံထိုက်သောအမြင်နှင့်အတူသဘောတူ ချို့ယွင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲ။ အထူးသအခြားသုတေသီများ (ဖာနန်ဒက်ဇ et al နေဖြင့်ယခင်ကမှတ်ချက်ချအဖြစ်။ , 2017), ကငျြ့ဝတျ incongruence သက်ဆိုင်သောသူတွေကိုအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီလက်တွေ့အချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် PPMI တစ်ခုစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုများ၏လက်တွေ့ကွဲပြားခြားနားမှုအဘို့, နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ်၏ဘုံနှင့် differential ကိုယန္တရားများ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမျိုးစုံပုံစံများပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်စဉ်များပေါင်းစပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ, compulsive အသုံးပြုမှုနှင့်အခြားအချက်များတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ကြုံတွေ့ထို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းကုသရပါမည်အကြောင်းစေခြင်းငှါငြင်းခုန်။
Grubbs et al ။ (2018) ပြည်နယ်: "တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ PPMI အစစ်အမှန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူအစစ်အမှန်ပြproblemsနာများဖြစ်ကြောင်း posit ပေမယ့်သူတို့အားပြproblemsနာများ၏ etiology စစ်မှန်သောစွဲထံမှကွဲပြားကြောင်း။ လက်တွေ့အခြေအနေများတွင်ဤ etiological မျိုးကွဲများခွဲခြားနိုင်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ ” အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း PPMI နှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုမှုနှစ်ခုလုံးသည်လက်တွေ့အခြေအနေတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံထိုက်သည်ဟူသောအမြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည်။ Grubbs et al ၏အမြင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်နှင့်အမျှဤအချက်ကိုအလေးထားပြောကြားလိုပါသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ၄ င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်သက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းမပြုသင့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် PPMI ပုံစံကိုပြသနာအမျိုးမျိုးရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်အဆိုပြုထားသော PPMI နှင့်ပါ ၀ င်သူများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားအပြစ်မရှိ၊ အလွန်အကျွံတုံ့ပြန်ခြင်း (သို့) အရေးမကြီးဟုကောက်ချက်ဆွဲရန်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ။ သို့ရာတွင်၊ ရူပဗေဒ / စွဲစွဲစေသောအသုံးပြုမှုနှင့် PPMI နှစ်မျိုးလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် Grubbs et al မှအကြံပြုထားခြင်းထက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကိုရှင်းပြ orthogonal ယန္တရားများထက်အပြိုင်သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်း synergistic ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုသည်စွဲလမ်းမှုအဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဤပုံစံသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကွဲပြားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအဆင့်များပေးသောကြောင့်၊ ဤပုံစံကိုလက်တွေ့လူ ဦး ရေများစွာတွင်စမ်းသပ်သင့်သည် (ဥပမာအားဖြင့်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်လွှတ်ပေးခြင်း) ။ ဒါဟာ compulsive / စွဲလမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဒုက္ခဆင်းရဲနှစ် ဦး စလုံး၏ etiologies အချို့သောအဓိကစိတ်ခွန်အားနိုး, အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုမျှဝေကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဖိအားပေးခြင်း / စွဲလမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးခွန်းများရှိကြောင်း၊ သုတေသနနှင့်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကိုတိုးတက်စေရန် CPUI-9 နှင့်ယနေ့လေ့လာခဲ့သောအချက်များအပြင်နားလည်ရန်အချက်များလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တင်ပြမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်ကုသမှုကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်မှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကုသမှုပန်းတိုင်များအပါအ ၀ င်အရေးကြီးသည်။ Grubbs et al မှအကြံပြုသည့်အတိုင်းအချို့ကိစ္စများတွင် Acceptance and Commitment Therapy နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူ၏ရည်မှန်းချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သူ / သူမ၏သိမှတ်နားလည်မှု၊ တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းမှုဖြစ်လျှင်အခြားကိစ္စများတွင်အမူအကျင့်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံး၏အခြားနည်းစနစ်များသည်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ (Potenza, Sofuoglu, ကာရိုးနှင့် Rounsaville, 2011) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသောတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ကုသမှုခံယူသောအခါရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် (Kraus, Martino, & Potenza, 2016) ။ Optimizer, တဦးချင်းကုသမှုပေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောတစ်ဦးချင်းစီ '' ပြဿနာကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောတဏှာ, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု, ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏မျိုးစုံရှုထောင့်-ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence နှင့်ယန္တရားများ, အပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ချမှတ်ခြင်း-သငျ့သညျ။
အဆိုပါစာရေးဆရာသူတို့အကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခရှိသည်သောကြေညာ။ ဒေါက်တာအမှတ်တံဆိပ် (Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်) ကိုဂျာမန်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (DFG) မှထောက်ပံ့ငွေ, သုတေသနနှင့်ပညာရေးဂျာမန်ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, ကျန်းမာရေးများအတွက်ဂျာမန်ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာနနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာအမှတ်တံဆိပ်အများအပြားအေဂျင်စီများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမူပြီ ဂျာနယ်ကဏ္ဍများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုတည်းဖြတ်တော်မူပြီ လက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျနေရာများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်အားပေးတော်မူပြီ; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ Potenza ဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Rivermend ကျန်းမာရေး, Opiant / Lakelight ဟော်မုန်းများနှင့်ဂျက်ဇ်ဂီတဆေးဝါးအကြံပေးတော်မူပြီ အဆိုပါ Mohegan Sun ကကာစီနိုများနှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ (ယေးလ်မှ) သုတေသနထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိ; အဘို့တိုင်ပင်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ impulse နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအပေါ်ဥပဒေနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြံပြု; ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောထောက်ပံ့လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှု, ဖျော်ဖြေထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း; edited ဂျာနယ်များ / ဂျာနယ်ကဏ္ဍများ; ပညာရေးဆိုင်ရာခမ်းနားကျည်အတွက်ပို့ချချက်, CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့ / သိပ္ပံကွင်းပေးထား; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်အခန်းကြီး generated ။
Allen က, အေ, Kannis-Dymand, အယ်လ်, & Katsikitis, အမ် (2017) ။ ပြProbleနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု - တဏှာ၏အခန်းကဏ္,၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့် metacognition တို့၏အခန်းကဏ္။ ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 70, 65-71 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.02.001.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Antons, အက်စ်, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2018) ။ အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသည့်ရောဂါများကို ဦး တည်တတ်သည့်အမျိုးသားများအတွက်စရိုက်လက္ခဏာနှင့်ပြည်နယ်၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 79, 171-177 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.12.029.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Banca, P. , မောရစ်, LS, Mitchell က, အက်စ်, Harrison, NA, Potenza, MN, & Voon, V. (2016) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်အသစ်များ, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ်, 72, 91-101 ။ https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.10.017.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Bechara, အေ (2005) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံးမှုမြား: A neurocognitive ရှုထောင့်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 8, 1458-1463 ။ https://doi.org/10.1038/nn1584.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Borges, AM, Lejuez, CW, & Felton, JW (2018) ။ အပြုသဘောဆောင်သောအရက်သုံးစွဲမှုမျှော်လင့်ချက်များသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို, 187, 179-184 ။ https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.02.029.CrossRefPubMedGoogle Scholar
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Schächtle, U. , Schöler, တီ, & Altstötter-Gleich, C. (2011) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းကဏ္။ ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14, 371-377 ။ https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0222.CrossRefGoogle Scholar
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Snagowski, ဂျေ, Laier, C တို့, & Maderwald, အက်စ် (2016a) ။ ပိုမိုနှစ်သက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ Neuroimage, 129, 224-232 ။ https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.01.033.CrossRefPubMedGoogle Scholar
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, လူငယ်, KS, Laier, C တို့, Wölfling, K. , & Potenza, MN (2016b) ။ တိကျသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းများကိုပေါင်းစပ်ခြင်း - Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) မော်ဒယ်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 71, 252-266 ။ https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.08.033.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Breiner, MJ, Stritzke, WG, & Lang, AR (1999) ။ ရှောင်ရှားရန်ချဉ်းကပ်။ တဏှာ၏နားလည်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်း။ အရက်သုတေသနနှင့်ကျန်းမာရေး, 23, 197-206 ။ https://doi.org/10.1023/A:1018783329341.CrossRefGoogle Scholar
Bridges, AJ, Wosnitzer, R. , Scharrer, အီး, Sun, C, & Liberman, R. (2010) ။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှလိင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်များ - အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအသစ်အဆန်း။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ, 16, 1065-1085 ။ https://doi.org/10.1177/1077801210382866.CrossRefPubMedGoogle Scholar
လက်သမား, DL, Janssen, အီး, ဂရေဟမ်, CA, Vorst, အိပ်ချ်, & Wicherts, ဂျေ (2010) ။ လိင်မှုကိစ္စတားဆီး / လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို SIS / SES-SF ပုံစံမှတိုသည်။ TD Fisher, CM Davis, WL Yarber, & SL Davis (Eds ။ )၊ လိင်-related အစီအမံများလက်စွဲစာအုပ် (Vol ။ 3, စစ။ 236-239) ။ လို့ Abingdon, GB ကို: Routledge ။Google Scholar
Carter က, BL, Lam, CY, ရော်ဘင်ဆင်, JD, ပဲရစ်, MM, ရေ, AJ, Wetter, DW, & Cinciripini, pm တွင် (2009) ။ ယေဘူယျအားဖြင့်တပ်မက်ခြင်း၊ နှိုးဆွခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်မိမိအစီရင်ခံခြင်းနှင့်ခေတ္တရပ်တန့်ခြင်းပြီးနောက် cue ဓာတ်ပြုခြင်း။ နီကိုတင်းနှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုတေသန, 11, 823-826 ။CrossRefGoogle Scholar
Carter က, BL, & Tiffany, ST (1999) ။ စွဲသုတေသနအတွက် cue- တုံ့ပြန်မှု၏ Meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲလမ်း, 94, 327-340 ။CrossRefGoogle Scholar
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ 1, 181-187 ။ https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.187.CrossRefGoogle Scholar
Cooper က, အေ, Delmonico, D. , Griffin-Shelley, အီး, & Mathy, R. (2004) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု - ပြpotentiallyနာဖြစ်နိုင်သည့်အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 11, 129-143 ။ https://doi.org/10.1080/10720160490882642.CrossRefGoogle Scholar
Everitt, BJ, & Robbins, TW (၂၀၁၆) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ - ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းမတော်မတရားပြုမှုများကိုအလေ့အထများနှင့်အပြုအမူများအားပြောင်းလဲခြင်း။ စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 67, 23-50 ။ https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033457.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Fernandez, DP, Tee, EYJ, & Fernandez, EF (2017) ။ ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ၉- ရမှတ်များအသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏အမှန်တကယ်မဖြစ်မနေကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပါသလား။ abstinence အားထုတ်မှု၏အခန်းကဏ္Explကိုရှာဖွေစူးစမ်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 24, 156-179 ။ https://doi.org/10.1080/10720162.2017.1344166.CrossRefGoogle Scholar
Georgiadis, JR, & Kringelbach, ML (၂၀၁၂) ။ လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ - လိင်မှုကိုအခြားအပျော်အပါးများနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ပုံရိပ်အထောက်အထား။ Neurobiology အတွက်တိုးတက်ရေးပါတီ, 98, 49-81 ။CrossRefGoogle Scholar
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Marchewka, အေ, & Sescousse, G. အ (2016) ။ Visual လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု - Cue သို့မဟုတ်ဆု? လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ် ဦး နှောက်ပုံရိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုအနက်ဖွင့်ရန်ရှုထောင့်။ လူ့အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 16, 402 ။ https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00402.CrossRefGoogle Scholar
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Sescousse, G. အ, Lew-Starowicz, အမ်, Kossowski, ခ, Wypych, အမ်, & Marchewka, အေ (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သလော။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများအတွက် fMRI လေ့လာချက်။ Neuropsychopharmacology, 42, 2021-2031 ။ https://doi.org/10.1038/npp.2017.78.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015a) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 125-136 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-013-0257-z.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Grubbs, JB, ပယ်ရီ, SL, Wilt, JA, & ရိဒ်, RC (2018) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x.
Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ, & Pargament, KI (2015b) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41, 83-106 ။ https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.842192.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Klucken, တီ, Wehrum-Osinsky, အက်စ်, Schweckendiek, ဂျေ, Kruse, O. , & Stark, R. (2016) ။ အတင်းအကျပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ပြောင်းလဲ appetitive အေးစက်နှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13, 627-636 ။ https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.01.013.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Kor, အေ, Zilcha-Mano, အက်စ်, Fogel, YA, Mikulincer, အမ်, ရိဒ်, RC, & Potenza, MN (2014) ။ ပြProbleနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39, 861-868 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.01.027.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Kraus, SW, Martino, S. , & Potenza, MN (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများ၏လက်တွေ့လက္ခဏာများ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 5, 169-178 ။ https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.036.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Kraus, SW, Meshberg-Cohen, အက်စ်, မာတီနို, အက်စ်, ကွီနွန်၊ LJ, & Potenza, MN (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 172(12), 1260-1261 ။ https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15060843.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Kraus, SW, Rosenberg, အိပ်ချ်, Martino, အက်စ်, Nich, C. , & Potenza, MN (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည့် Self-Efficacy စကေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကန ဦး အကဲဖြတ်ခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 6, 354-363 ။ https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.057.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Laier, C တို့, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2014) ။ ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားနှင့်သိမြင်မှု - အမူအကျင့်အမြင်ကနေဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစွဲအထောက်အကူပြုအချက်များအပေါ်သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 21, 305-321 ။ https://doi.org/10.1080/10720162.2014.970722.CrossRefGoogle Scholar
Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2014a) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံလွှာအပြောင်းအလဲသည်မရေရာမှုများအောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 473-482 ။ https://doi.org/10.1007/s10508-013-0119-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Pekal, ဂျေ, Schulte, FP, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2013) ။ Cybersex စွဲ - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါတွေ့ကြုံခဲ့ရသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ ၌လိင်ဆက်ဆံမှုမဟုတ်ပါကထူးခြားစေသည်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 2(2), 100-107 ။ https://doi.org/10.1556/jba.2.2013.002.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Laier, C တို့, Pekal, ဂျေ, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2014b) ။ လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုများကိုအသုံးပြုသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်ဆိုက်ဘာဆက်စ်စွဲခြင်းကိုအားရကျေနပ်ဖွယ်ယူဆချက်ဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 17, 505-511 ။ https://doi.org/10.1089/cyber.2013.0396.CrossRefGoogle Scholar
လူး, အိပ်ချ်, Ma, အယ်လ်, Lee က, တီ, Hou, အိပ်ချ်, & Liao, အိပ်ချ် (2014) ။ ထိုင်ဝမ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားဆိုက်ဘာဆက်ဆံများ၊ လိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့်တစ်ညတာကိုလက်ခံရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သူနာပြုသုတေသနဂျာနယ်, 22, 208-215 ။CrossRefGoogle Scholar
O'Neil, အယ်လ် (2018) ။ သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး porn အတွက်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကိုစောင့်ရမှာလဲ? မှရယူရန် https://www.esquire.com/lifestyle/sex/a18194469/incest-porn-trend/.
Potenza, MN, Sofuoglu, M, Carroll, KM, & Rounsaville, BJ (2011) ။ စွဲများအတွက်အပြုအမူနှင့် pharmacological ကုသမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ အာရုံခံဆဲလျ, 69, 695-712 ။ https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.02.009.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
ရော်ဘင်ဆင်, TE, & Berridge, KC (2000) ။ စွဲ၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization အမြင်။ စွဲလမ်း, 95, S91-117 ။ https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.95.8s2.19.x.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Romer Thomsen, K. , Callesen, MB, Hesse, အမ်, Kvamme, TL, Pedersen, MM, Pedersen, MU, & Voon, V. (2018) ။ Impulsivity စရိုက်များနှင့်လူငယ် -related အပြုအမူ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 7, 317-330 ။ https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.22.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Schiebener, ဂျေ, Laier, C တို့, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်နေတာလား။ multitasking အခြေအနေတစ်ခုတွင် cybersex အချက်များကိုလွန်လွန်ကျူးစွာလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုခြင်းသည် cybersex စွဲရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 4(1), 14-21 ။ https://doi.org/10.1556/jba.4.2015.1.5.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Snagowski, ဂျေ, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2015) ။ cybersex စွဲရောဂါလက္ခဏာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလှုံ့ဆော်မှုကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းနှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ စိတ်ပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 6, 653 ။ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00653.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Snagowski, ဂျေ, Laier, C တို့, Duka, တီ, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောသင်ယူမှုအတွက်ပုဂ္ဂလဆန်သောတွန်းအားသည်ပုံမှန်ဆိုက်ဘာဆက်စ်သုံးစွဲသူများ၏နမူနာတွင်ဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုကို ဦး တည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 23, 342-360 ။ https://doi.org/10.1080/10720162.2016.1151390.CrossRefGoogle Scholar
Snagowski, ဂျေ, Wegmann, အီး, Pekal, ဂျေ, Laier, C တို့, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2015) ။ ဆိုက်ဘာဆက်တင်စွဲမှုတွင်သွယ်ဝိုက်သောအသင်းအဖွဲ့များ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်သွယ်ဝိုက်။ မဟုတ်သောအသင်းအဖွဲ့စမ်းသပ်မှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်း။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 49, 7-12 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.05.009.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Stark, R. , Kagerer, အက်စ်, ဝေါလ်တာ, ခ, Vaitl, D. , Klucken, တီ, & Wehrum-Osinsky, အက်စ် (2015) ။ Trait လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုမေးခွန်းလွှာ: အယူအဆနှင့်အတည်ပြု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 12, 1080-1091 ။ https://doi.org/10.1111/jsm.12843.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Stark, R. , Kruse, O. , Wehrum-Osinsky, အက်စ်, Snagowski, ဂျေ, အမှတ်တံဆိပ်, အမ်, Walter, ခ, & Klucken, တီ (2017) ။ အင်တာနက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာ (ပြproblemနာ) ကိုအသုံးပြုရန်ခန့်မှန်းသူများ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏လက္ခဏာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာဆီသို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်မှုလမ်းကြောင်းများ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 24, 180-202 ။CrossRefGoogle Scholar
Taymur, ဗြဲ, Budak, အီး, Demirci, အိပ်ချ်, Akdağ, HA, Güngör, BB, & Özdel, K. (2016) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ပညာနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောယုံကြည်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာခြင်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 61, 532-536 ။CrossRefGoogle Scholar
Tiffany, ST, Carter, BL, & Singleton, EG (၂၀၀၀) ။ သက်ဆိုင်ရာ variable တွေကိုစွဲလမ်း၏ခြယ်လှယ်, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အနက်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများ။ စွဲလမ်း, 95, 177-187 ။CrossRefGoogle Scholar
Wegmann, အီး, Oberst, U. , Stodt, ခ, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2017) ။ ပျောက်ကွယ်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကနှင့်အထူးသဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးပြorderနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူအစီရင်ခံစာများ, 5, 33-42 ။CrossRefGoogle Scholar
Weinstein, AM, Zolek, R. , Babkin, အေ, Cohen ကို, K. , & Lejoyeux, အမ် (2015) ။ cybersex အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်စ်ကိုအသုံးပြုသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရာတွင်အခက်အခဲများရှိသည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 6, 54 ။ https://doi.org/10.3389/fpsyt.2015.00054.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
Wéry, အေ, Deleuze, ဂျေ, Canale, N. , & Billieux, ဂျေ (2018) ။ စိတ်ခံစားမှုအရဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်လူတို့၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရာတွင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 80, 192-201 ။ https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2017.10.004.CrossRefPubMedGoogle Scholar
Whang, LS, Lee က, အက်စ်, & Chang, G. အ (2003) ။ အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက် - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပေါ်အပြုအမူနမူနာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ 6, 143-150 ။ https://doi.org/10.1089/109493103321640338.CrossRefGoogle Scholar
Xu, ZC, Turel, O. , & Yuan, YF (2012) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲ: လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအချက်များ။ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ၏ဥရောပဂျာနယ်, 21, 321-340 ။ https://doi.org/10.1057/ejis.2011.56.CrossRefGoogle Scholar
Yoder, VC, Virden, TB, & Amin, K. (၂၀၀၅) ။ အင်တာနက်အပြာစာပေနှင့်အထီးကျန်ခြင်း - အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 12, 19-44 ။ https://doi.org/10.1080/10720160590933653.CrossRefGoogle Scholar
လူငယ်တို့, KS (2008) ။ အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆေးကုသမှု။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, 52, 21-37 ။ https://doi.org/10.1177/0002764208321339.CrossRefGoogle Scholar